5 Inta badan Meelaha Dahsoon In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 5 Inta badan Meelaha Dahsoon In Europe
Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo(Last Updated On: 01/01/2020)
qaarada Yurub waa mid ka mid ah oo buuxa taariikhda hodanka ah, sheekooyin cajiib ah, adventures, iyo mararka qaarkood wax qarsoon. qaarada kastaa waxa uu leeyahay xeer gooni ah goobaha la'ayahay. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay u muuqataa in Europe ayaa qaar ka mid ah meelaha la yaab leh oo dahsoon ee dunida ugu. Ku maqan had iyo jeer uu leeyahay rafcaanka socdaalayaasha adventurous. Sidaa darteed, ay timaado sida la yaab ma laha sababta safra more dhicin waxa ay gool si ay u booqdaan meelo waxay ka dhigi. Save A tareenka ayaa isu keenay liis ka mid ah shanta meelaha ugu dahsoon ee Europe in hubiyo in ay tahay in la yaabid iyo yaab xitaa ugu cusbaynayaa Rakaabkii.
1. Inta badan Meelaha Dahsoon In Netherlands The – Giethoorn
meesha ugu horeysa waxaan ku talin karaa waa dahsoon ee dareenka in ay tahay arrin u gaar ah. Waxay ku taalaa ee Netherlands oo waa wax suurto gal ah mid ka mid ah meelaha ugu wacan aad booqan kartaa. Giethoorn waa tuulo in waa sida kale ma jiro. Qaar badan oo ka fiirsanayn sida cararaan ugu fiican nolosha casriga ah. Waxay leedahay ma wadooyinka oo si dhib kasta oo dadka ku nool waxa ku jira. Dhab ahaan, waa nooc ka mid ah cut ka inta kale ee Holland.
waqti in Giethoorn dhigi doonaa inaad dareentid sida haddii aad ka tagtay dunida casriga ah iyo dhibaatooyin ay si buuxda u. Time duuli doonaa by, oo waxaad dareemi doontaa si buuxda u riixdey. Ilaa hadda sida ay fiirin iyo dareenka of go tuulada, waxa ugu horeeya ee aad aragto waa sida yar waa. Waxa kale oo aad arki doontaa in ay jiraan waddooyin aad u yar in ay qaataan. Dhab ahaan, waxaa jiri doona kanaalada jidka dheeraad ah iyo raacid doon laga heli karaa badan wadooyinka si Dilal. guryaha ku dhex yaal tuulada idin siin doonaa ah vibe jir dunida.
2. Eisriesenwelt Ice boholaha
Haddii aad waligaa heli karto naftaada in Austria, waa in aad mid ka mid ah yaabab ugu weyn dabiici ah in ay jiraan qorsheeyo booqasho. Eisriesenwelt waa mid ka mid ah godadka baraf ugu weyn ee ka jira dunida. Dhab ahaan, marka loo tarjumay in English, waxaa loola jeedaa World of Rafaa. Stepping galay this godkii fantastic dhigi doonaa inaad dareentid sida haddii aad tahay on set ah of movie ah leeska. Waxaa jira dhawr wax yaab leh oo ku saabsan Eisriesenwelt.
marka hore, size sheer godka barafka laftiisa aad ka tagi doono ka Yaabid. Going dhex waxaad qaadan kartaa qiyaastii saacad iyo badh ilaa complete. Marka labaad, gudaha godka aad ka tagi doono qabow iyo jiitay. The badan oo tirooyin baraf, farshaxan baraf, iyo derbiyo barafka waa arrin cajiib ah oo ka tago badan lumay waayo, erayadii. Qaar ka mid ah qaababka baraf weyn waa inaga badan 20 mitir! Oo goor gudcur ah godkii, barafka ciinwaanka by magnesium ka laambadihiinnuna doonista “iman nool.” Sida nuurka oo kale maraa nuurka iyo qoob ee asalka ah, dareenka qarsoodiga dabiiciga ah si xaqiiqo ah aad ku dhufan doono. Gebogebadii, qof ku dhow Werfen, Austria loo baahan yahay in ay qaataan waqti si ay u booqdaan Eisriesenwelt.
Salzburg in ay qaataan Tareenadu
Munich inay ku tuuraan Tareenadu
Innsbruck inay ku tuuraan Tareenadu
Vienna si ay Tareenadu Werfen
3. Inta badan Meelaha Dahsoon Si Booqo In Italy – Capuchin catacombs Of Palermo
The Capuchin catacombs ee Palermo hoos aad dhabarta u diri kartaa gargariirid a. Waayo, dadka magangalyo reyreyn in raaxaysan dareen cabsi iyo cabsi, catacombs waa meel aad u fiican in ay booqasho. catacombs Kuwan waxaa gudubyadaas oo ay silica iyo qarsoodiga ninkii maalin kasta. Dhammaan waxay qaadataa waa mid ka mid booqasho ah in aad iskaaga u hesho iska dhigaya qaar ka mid ah su'aalaha nolosha weyn.
Sheekadu waxay ka dambeeya catacombs Capuchin waa arrin xiiso. Waa meel lagu nasto ee kama dambaysta ah hadhaagii kun oo qof oo ka soo dhammaan qaybaha nolosha. Inta badan ee catacombs waa suufiyadoodii iyo hodanka waqtiga. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira dadka waawayn caadiga ah dhowr iyo sidoo waxaa. jiida catacomb hoostiisa keniisad ah oo kaniisad ah ku xiga. Socodka iyada oo waddooyinka ee catacombs ee, waxaad arki doontaa qiyaastii 8000 meydadka mummified. Qaar ka mid ah kuwani waa arrin jir, xataa shukaansi dib ugu 1600s ah. jidhadhkooda waxaa lagu la mariyey iyo sidoo kale sii raagayaan. Gebogebadii, sida argagax sida catacombs ka muuqdaan, iyagu waa a goob dalxiis oo caan ah iyo waa booqashada ah oo ku kacaya kuwa in ay ku qaadan kartaa.
Marsala in Tareenadu Palermo
Bagheria in Tareenadu Palermo
Trapani in Tareenadu Palermo
The Chateau de Brissac waa in koonfureed ee Angers, magaalo ee Loire River Valley. Waa qalcaddii dheer oo dhan France. Tani qalcaddii qurux badan Faransiis waxaa dhisay qarnigii 15-ka oo uu hor joogsaday tijaabada waqtiga. Ka hor inta ay dayactir ay ku Duke of Brissac, waxa uu ahaa a qalcaddii Dr Makumbe in dib u qorin in qarnigii 11-ka. Si kastaba ha ahaatee, Duke waxaa dib gelin grand Renaissance style qalcaddii a.
Chateau de Brissac muuqato Chateau caadiga ah marka hore. Si kastaba ha ahaatee, ka dambeeya Aamino maalin ah, waxaa jira halyeey dahsoon in drives badan si ay u soo booqdaan. sheekooyin muuqasho badan oo la xidhiidha dhulka iyo Chateau laftiisa. The ugu caansan waa halyeey ee Lady Cagaaran. Sida laga soo xigtay halyeeygii hore ayay la dilay in mararka qaar qalcaddii bartamihii qarnigii 15-ka ah. Green Lady The, ama iyada uu noqday caan ah, Lady Cagaaran, ayaa la sheegay in mushaaxaan qalcaddii weli. waxaad dhahdaa badan oo ay ku arkay naag ka mid socod ah dharka cagaaran iyada oo sabab ama sareysa munaaradaha taagan. Dadka hadda sheegayaan in ay ku soo kornay caadaysteen iyadii, laakiin dalxiisayaal badan ayaa laga cabsi. ka arkay reebo, waxaad dhahdaa badan oo aad iyada maqli karo moans dhan qalcaddii in saacadihii hore ee subaxdii.
Rouen in Paris Tareenadu
5. Inta badan Meelaha Dahsoon Si Booqo In Belgium – Dinant
Dinant waa magaalo kale oo yar yar oo dhiiri dareen qarsoodiga in visitors. Magaalada waxa ku sugan gobolka Namur ee Belgium. Waa meel ku fiican si ay u tagaan haddii aad qorshaynaysid cararaan todobaadkan uga noqdeen nolosha magaalada weyn a. Isku nolosha magaalada iyo bay'edda ku xeeran dabiiciga ah waxaa breathtaking. Buurihii ee asalka ah ee magaalada weheliso webiga Meuse ku dhex maraya magaalada waa ku filan si ay awood qof in ay dib laad iyo unwind. Waxa uu qabtay Quluubta martida badan oo ka dhigi doonaa inaad dareentid sida aad ku sugan tahay dunida kale.
Brussels si Tareenadu Dinant
Antwerp in Tareenadu Dinant
Ghent in Tareenadu Dinant
Liege in Tareenadu Dinant
aad diyaar u tahay inay arkaan meelaha dahsoon badan in Europe dalabyo tahay? Ka bilow shantii meelo dahsoon ugu oo soo arag meeshuu wadada aad qaadataa. Hubi inaad si fiican u qorsheeyaan aad fasax iyo Tigidhada Book tareenka waqtiga la Save A tareenka!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “5 Inta badan Meelaha Dahsoon ee Europe” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-mysterious-places-europe%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#dahsoon #mysteriousplaces europetrains europetravel eurotrip trainjourney